ပြည်သူမှပြည်သူသို့… – PVTV Myanmar
·6months ago ·41 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Like – 87K Share – 22513
Kay Reh says:
2021-07-15 at 6:59 PM
မြန်မာပြည် ကြီး ဘေးကင်းပါစေ , အမြန်ဆုံး ပြည်သူပြည်သားများ ကျန်းမာ ကြပါစေ🙏🙏
Aye Mya Mya Soe says:
2021-07-15 at 7:00 PM
စျေးတွေလဲ ဖွင့်နေဆဲပါ ဘာစည်း ဘာကမ်းမှမရှိ ဆေးရုံတွေလည်းမနိုင်တော့ဘူး SACက covid ကို bio weaponအနေနဲ့ genocideလုက်နေတာကို အမြန်ဆုံးအရေးယူနိုင်အောင် NUGအနေနဲ့ ပထမဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပေးစေချင်ပါတယ်
2021-07-15 at 7:01 PM
2021-07-15 at 7:02 PM
အမြန်ဆုံး အ​ကောင်အထည်​ဖော် ​ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ​မျှော်လင့်ပါတယ် ဆရာကြီးရှင့်🙏🙏🙏
Tiff Zar says:
Dear NUG, please send terrorists to ICJ / ICC asap … They are going to kill us all 🙁
Aung Tun Kyaw says:
2021-07-15 at 7:06 PM
Dear Dr, How are you. I hope you are in good health. As for me I am dying
Bwae Hto Kham says:
2021-07-15 at 7:10 PM
ဆရာတို့စီစဉ်သမျှ အောင်မြင်ပါစေ။ အဆင်ပြေပါစေ
Su May Yee says:
2021-07-15 at 7:11 PM
Thank you so much for your great contributions to people of Myanmar…….Sayargyi!
Min Khant Zaw says:
2021-07-15 at 7:12 PM
Yoo you guys should do really quick for the people… I’m not blaming to NUG, really appreciate ur efforts for us rn we need some good news for us come on man do something for us
Su Hlaing Tobita says:
2021-07-15 at 7:14 PM
Do not focus on negative, let ‘s move on – we all are positive- go on ! God will bless you
Ei Moh says:
မှန်ပါတယ် ဆရာကြီးရှင့် ဘယ်လောက်ပဲရန်တိုက်တိုက် သွေးမကွဲပါဘူး အပြစ်မမြင်ပါဘူးရှင့်
Theresa Khin says:
2021-07-15 at 7:16 PM
Dear dr, please help us . Really serious case. We can’t fight Covid
2021-07-15 at 7:18 PM
Maurice Lim says:
Bravo congratulations…God bless you Dr. Zaw Wai Soe.
Si Si Han says:
2021-07-15 at 7:20 PM
Exactly Saya we did non -violence up to now.
Khin Sandy says:
2021-07-15 at 7:21 PM
အရင်ကိုဗစ်ပထမ ဒုတိယလှိုင်းမှာ ဆရာကြီးတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေကို ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ဖူးပါတယ် ..
အခုတော့ ဆရာ 🥲 ပြည်သူတွေမှာ အရှင်လတ်လတ် ငရဲကျခံနေရသလို စကစရဲ့ ယုတ်မာမှုကို ခံနေရပါတယ် 😭😭
Yee Mon Aung says:
2021-07-15 at 7:22 PM
ဓမၼ အရိပ္ says:
2021-07-15 at 7:23 PM
ရာ ပြည်သူ့ကိုယ်စား လေးစား
Daw Yin Yin Aye says:
2021-07-15 at 7:39 PM
Tin Moe Kyi says:
အားတက်မိပါတယ် လေးစားပါတယ် ကျေးဇူးပါဆရာကြီး❤️
Mya Mya Aye says:
ဆရာကြီးနဲ့ အတူ ပြည်သူအားလုံး ခံစားရပါတယ်။
ဆရာကြီးနဲ့ NUG အဖွဲ့သားအားလုံးလည်းကျန်းမာ အောင်မြင်ပါစေ။
Ngwar Sar says:
We support NUG ..We only acceptable NUG Government in Myanmar
2021-07-15 at 7:42 PM
Supporting NUG and CRPH
Always praying for you guys well being Sayar.
Nwe Nwe Khine says:
ကျေးဇူးပါ ဆရာ ကြီး၊အရေးတော်ပုံအောင်ပါစေ
Flower YT says:
2021-07-15 at 7:43 PM
ဆရာကြီးတို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေမှုအပေါ် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျန်းမာပါစေ ဘေးကင်းပါစေ ဆရာကြီးရှင်
Saw Ma Lar says:
2021-07-15 at 7:49 PM
ပြည်သူတွေအတွက် အမြဲစဉ်းစားပေးတတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာကြီး နေကောင်းကျန်းမာပါစေ အမြဲဆုတောင်းနေပါတယ် 🙏🙏🙏 People to people 💪💪💪 သာယာအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းသော မြန်မာပြည်ကြီးရောက်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ဆရာကြီး
2021-07-15 at 8:08 PM
Rubin Lazarus says:
2021-07-15 at 8:14 PM
Dr, thank very much you are the best people in this would
Miee Miee Miee Miee says:
2021-07-15 at 9:16 PM
ချစ်မြတ်နိုးလေးစားရပါသောCDM အာဇာနည်မိသားစုများ ကပ်ရောဂါဘေးကင်း ကျန်းမာ အသက်ရှည် အစစ အန္ထာရာယ် ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်🙏🙏🙏🙏🙏🙏💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟✊💙💙💙💙😘😘😘😘RESPECT RESPECT RESPECT🌟💙✊🌟💙✊🙏🙏🙏🙏🙏🙏💙💙💙
FIGHTING TOGETHER WITH NUG✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟💙💙💙💙
Phugjaung Gyung says:
2021-07-15 at 10:07 PM
NUG must prevail with the people of Myanmar for Genuine Federal Democratic Union of Myanmar✊✊✊
Both interviewer and interviewee are excellent. Thank you very much. We will win.
Swe Swe Aung says:
2021-07-15 at 11:15 PM
Could you send to min aung haling immediately in international criminal court please 🙏🙏🙏
Rose Khin says:
2021-07-16 at 12:45 AM
Sayar voice encouraging our people
Tin Tin Kywe says:
2021-07-16 at 2:35 AM
We understand Sayagyi and be careful your health as well.
2021-07-16 at 6:53 AM
Very worth to listen the interview, thanks to interviewer for asking and to Sayar gyi for guiding
2021-07-16 at 9:53 AM
Really NUG,CRPH try their best but in side AhMaLa holds authority by weapons . How to move out this army authorities, please who can do each person or some group or big group please help us.
2021-07-16 at 3:34 PM
Congratulations par Dr.Take care of your health.We support ‘NUG.”.We stand with “NUG.’We believe “NUG.'”NUG’ is “Demo people’s vision.With best wishes.
Thawng Sum says:
2021-07-16 at 8:25 PM
Excellent, you are highly appreciated, we miss you so much in this critical situation. We are waiting for you.
Mg Lwin says:
2021-07-17 at 9:34 PM
May you be good health sir.Always respect you.